Tsy hita izay tena foto-dresaka… fanaovan-dalàna | NewsMada
Tsy hita izay tena foto-dresaka… fanaovan-dalàna
Hifarana ny fampielezan-kevitra. Inona ny fiantraikany amin’ny mpifidy any ifotony? Samy mitsara tena ny tsirairay. Tsy ny amin’izay ho voka-pifidianana loatra fa ny tena foto-dresaka nandritra izay fampielezan-kevitra izay. Saika tsy hita loatra izay tena adihevitra, foto-dresaka…
Niaraha-nahita ary nampanongo tena ireo mahalala: nibahan-toerana ny fihetsiketsehana ivelany: fanaovana fampisehoana, asa soa…Tena mahalala ny asany ve ireo kandidà raha voafidy ho solombavambahoaka eo? Na izay fotsiny aza, tsy misy fanazavana firy amin’ny mpifidy eny ifotony.
Misy, ohatra, ny kandidà sahy milaza imasom-bahoaka fa tsy mpanao lalana fa lalàna izy, saingy ataony ihany ny lalana, ny sekoly… Inona moa izany? Famitaham-bahoaka tsotra izao. Tsy matoky tena hahazo vato raha tsy manao asa soa. Na tsy misy tolo-dalàna handresen-dahatra…
Izay fandrafetana sy fanolorana tolo-dalàna izay no tena andrasana amin’ireo kandidà. Misy azo avadika ho tolo-dalàna ireny hetahetam-bahoaka ireny? Anjaran’ny kandidà sy ny mpiara-dia ny mamaky loha amin’izany: inona ny maika, inona ny azo tanterahina sy mety ho vita avy hatrany… ?
Eo koa ny fandresen-dahatra ny governemanta hanao an’itsy sy iroa, raha voafidy eo ny tena, fa tsy izao mbola kandidà izao no hamita izany… hahazoana vato fotsiny: ilokalokana amin’ny hoe asa soa itsinjovana vahoaka. Anjarany koa ny mitondra ny hetahetam-bahoaka amin’ny mpanatanteraka.
Sahy sy mahavaky ny volavolana tetibolam-panjakana ary miady izany amin’ny governemanta hanatanterahana izay hetahetam-bahoaka izay ve ireo kandidà raha voafidy eo? Ilaina ny fandresen-dahatra fa ny solombavambahoaka no tompon’ny teny farany amin’ny tetibolam-panjakana.
Mahavalalanina sy mahafanina: tsy firy ny kandidà miresaka momba ireo rehetra ireo amin’izao fampielezan-kevitra izao. Tsy misy afitsoka afa-tsy ny fihetsiketsehana ivelany ny sasany? Hany ka tsy sahy milaza sy manazava izay tena asany… Mila fantarina tsara izay hofidina amin’izany?